“तालुमा फर्सी जत्रो आलु फल्ने” मेरो पुर्खाको रगत ममा पनि - Bhuwan Thapa "Bahuvi"
“तालुमा फर्सी जत्रो आलु फल्ने” मेरो पुर्खाको रगत ममा पनि
यहाँनेर, निजी प्रासङ्गिकता जोड्ने धृष्टता पलाएर आयो ममा । मेरो स्कूले जीवनमा, पढ्न लेख्न भन्दा चित्र मूर्ति जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा धेउन्दा दिने जन्तु परें म । बल्लतल्ल गरेको एसएलसी पछि दुर्इ तीन वर्ष मास्टरी काम गरेर हल्लियो गाउँ मै । शुभ चिन्तक बुध्दिजीवीहरूले ललितकला क्याम्पस पढ्ने सल्लाह दिन थाले पछि, सपना बिपनामा ललितकला क्याम्पसको भूत चढ्न थाल्यो मलार्इ ।
एक दिन मेरो कल्पनाको दुनियाँ, देशको राजधानी काठमाडौं स्थित ललितकला क्याम्पसमा पढ्ने सपना बिपनामा परिणत । त्यो क्षण मेरो लागि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जित्नु सरह ।
ललितकला क्याम्पसमा सैध्दान्तिक विषय पढ्नु पर्दैन भन्ने भान मलार्इ । अग्रेजी गणित जस्ता शत्रु बिषयहरू पढ्न नपरे संसार जित्छु भन्ने चाहना । तर कुरो अर्कै, अनिवार्य विषय पढ्नै पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम ।
दुर्इ दर्जन बर्ष पहिलेको कुरा । तत्कालीन समयको अंग्रेजी प्राधापक मथुरा सर । पछिल्लो बेन्च मेरो स्थार्इ बसार्इ । अंग्रजी मेरो लागि भालुलार्इ पुराण । शुरूशुरू पढार्इको सिलसिला, Grammar विषय पढाउने क्रमः सरव्दारा एकाएक पछिल्लो लहरमा बसेको मै माथि इङ्गित । “तिमी उठ र भन” भन्दै सरको प्रश्न सोझ्यार्इ “perfect Continuous Tense मा for र since कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ ?” म झसँङग हुँदै उठेर जवाफ फर्काउन तयार “Point of time मा Since र Period of time मा for हुन्छ सर “ । “थ्याङ्क्यु “ सरको स्यावासी !
यतिखेर, म अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण । कक्षाका अपरिचित साथीहरू सबैले म तिरै हेरिरहेका, उनीहरूलार्इ लाग्दो हो यो मान्छे र्इङलिशमा छुरा भन्ने । बिचरा साथीहरूलार्इ के थाहा ! यो संयोग थियो भनेर । म आफै चकित छु मैले जिन्दगीमा यति कुरा कति खेर सम्झन भ्याएको रहेछु ‘म जे कुरा जान्नु सरले त्यही कुरा सोध्नु !’ आज पनि मलार्इ यस्तो लागिरहेछ कि “तालुमा फर्सी जत्रो आलु फल्ने” मेरो पुर्खाको रगत ममा पनि बगिरहेको रहेको रहेछ कि क्यार .......